Telo fanampiny Emmy Award ho an'ny Apple TV + andian-dahatsoratra ho an'ny ankizy | Avy amin'ny mac aho
Loka telo hafa Emmy andro hafa ho an'ny Apple TV + Andian-jaza
Manuel Alonso | 19/07/2021 14:00 | maro
Hatramin'ny nanombohan'ny Apple TV + dia nandresy hatrany ny kalitaon'ny atiny. Mandritra izany fotoana izany dia mbola miharihary ny vola amin'ny tsy fisiany. Saingy mazava ho azy fa misy ny kalitao ary raha tsy avelao izy ireo hilaza amin'i Ted Lasso izay efa amin'ny vanim-potoana faharoa ary azo antoka fa hahazo loka be dia be toy ny tamin'ny voalohany izy. Toy izany koa no nitranga tamin'ny andian-jazakely sasany hita tao amin'ny fantsona. Nomena loka izy ireo Loka Emmy antoandro.
Apple TV dia nahazo loka bebe kokoa, ary manohy manangona dera ho an'ny fandaharana ho an'ny zanany ao amin'ny onja faharoa an'ny Loka Emmy antoandro natolotra ny sabotsy lasa teo. Fampitana mivantana, ny tapany voalohany amin'ny faha-XNUMX taonan'ny loka Daymy Emmy dia nifantoka tamin'ny fandaharana sy ny sarimiaina nataon'ny ankizy. Ilay horonantsary "Ity Izahay Izao: Notes for Living on Planet Earth" dia nandrombaka ny fanendrena azy ho "Programme Animated Daytime Animated Special Class".
«Rano mihandrona"Seho iray izay mampianatra ny fahatsiarovan-tena nanampy ny loka Peabody azony tamin'ny fandresena ho an'ny 'Fanontana miavaka ho an'ny Animated Preschool Show,' na dia nahazo fanendrena tamin'ny sokajy maro hafa aza izy tsy naharesy." Nomena voninahitra tamin'ny fanendrena amin'ny sokajy maro koa ny helpsters, saingy tsy nahavita nahazo loka. Ny fampielezana ny asabotsy dia ny faharoa tamin'ny fombafomba Emmy nandritra ny telo andro tamin'ny 2021, taorian'ny fandefasana voalohany ny 25 Jona.
Mazava ho azy, Apple TV + izay alehany dia mandresy. Efa zatra ny andian-dahatsoratra misy ao amin'ny Apple Tv + izahay izao izay mahazo mari-pankasitrahana. Tamin'ny taon-dasa dia efa nahazo loka mitovy amin'izany izy ary amin'ity taona ity dia mandray azy ireo indray. Manamafy fa mitohy ny kalitao ary azo antoka fa hitohy isan-taona. Indrindra miaraka amin'ireo fanovana niseho tao amin'ireo mpiasa miandraikitra ny Apple Tv +.
Hihaino tsara isika loka ho avy izay azo raisin'ny fizarana fialamboly an-tserasera Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Loka telo hafa Emmy andro hafa ho an'ny Apple TV + Andian-jaza
Tehirizo hatrany amin'ny alàlan'ny BuhoCleaner ny kapila mafy ataonao
Nilaza i Gurman fa halefa amin'ny fahavaratra lasa ny MacBook Pros vaovao